YINTONI OZA KUYINXIBA KUMTSHATO WOMTSHATO OMNYAMA - IFASHONI
Eyona Ifashoni Yintoni oza kuyinxiba kumtshato womtshato omnyama
Yintoni oza kuyinxiba kumtshato womtshato omnyama
Jonga ezinye zeendlela zokunxiba esizithandayo emadodeni nakwabafazi kwaye kufuneka ugcine ntoni xa ukhetha isinxibo sakho somtshato womtshato omnyama.
Ukuhlaziywa ngoMeyi 20, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ukuba ufumene isimemo kumtshato womtshato omnyama, yazi ukuba umsitho uza kuba mnandi. Ngapha koko, ekuphela kwendlela yokunxiba esesikweni ngakumbi kunentambo emnyama y tie emhlophe, eyi-Oscars esekwe kwaye engaqhelekanga ncam. Ke unxiba ntoni kumtshato weqhina elimnyama?
Kumadoda, impendulo ilula: i-tuxedo, ngokoqobo ngetayi emnyama. Ukuba akanayo enye, kuya kufuneka ayiqeshe enye, ayigqibe ngesikhumba kunye nelungelo elilodwa lomenzi wechiza okanye ezinye izihlangu ezisesikweni. Ukuba isimemo sithi 'iqhina elimnyama ngokuzithandela,' anganxiba i-tux kodwa angakhetha isuti emnyama ngetayi emnyama endaweni yoko. Ukuba ithi 'iqhina elimnyama lokuyila,' unokuhamba kancinci ngombala kunye nesitayile ngelixa egcina impahla yakhe isesikweni.
ucaphula intombazana oyithandayo
Kubafazi, imigaqo ayinzima kangako. Njengondwendwe lomtshato womtshato omnyama, awunakuhamba gwenxa ngengubo ende emiselweyo. Kwaye unokufuna ukuya kuyo, kuba asifumani mathuba amaninzi okunxiba enye. Kodwa ukuba unomdla ngakumbi kwilokhwe emfutshane ye-cocktail, kulungile, kodwa qiniseka ukuba kukho inqaku elihombisayo kuyo, mhlawumbi amanye amaso amenyezelayo okanye ukuhonjiswa ngegolide. Umnyama ngumbala wokunxiba ongasileliyo kwilokhwe emnyama yeendwendwe zomtshato, kodwa iithowuni ze-jewel, isinyithi kunye nezinye ii-hues ezimnyama okanye ezinamandla zinokusebenza kakuhle nazo. Nawe unokufuna ukurenta kwinkonzo enje Qeshisa iRunway , kuba iigawuni ezisemthethweni zinokubiza amaxabiso. Ubucwebe beedrama okanye bokuphakama bufanelekile. Zive ukhululekile ukwenza isitayile seenwele zakho kuhlaziyo oluhle, nangona kungafuneki.
Ngoku ukuba uyazi iziseko, jonga ezinye zezinto esizithandayo ezimnyama zokunxiba umtshato wamadoda nabafazi.
(Kwaye i-psst ... nge-Knot, izibini zinokunika iindwendwe zazo iipesenti ezingama-20 zekhowudi Qeshisa iRunway . Yiya nje kwideshibhodi yakho yeWebhusayithi yoMtshato-okanye wenze enye-ukuyikhulula.)
Isinxibo sabasetyhini soMtshato oMnyama oMnyama
Isinxibo esimnyama somtshato sinika ithuba lokuziva ngathi uyinkosazana. Apha, umbala obomvu oqaqambileyo wenza ifom ye-asymmetrical neckline engena kwisiketi esigcweleyo.
Isilayidi kunye neWillow Isinxibo seSimonetta, ukusuka kwi- $ 80, RenttheRunway.com
I-LBD inokusebenzela umcimbi osemthethweni ukuba unxibe isacholo esithile kunye nezihlangu ezintle.
Nxiba abemi UAlicia unxibe ilokhwe ye-A-line, $ 198, It rdandTaylor.com
Isinxibo esimnyama somtshato womfazi onxibayo ufumana i-bohemian twist kule stunner ye-lace.
BCBG uMax Azria Isinxibo se-Andi, $ 398, BCBG.com
Ukuba ufuna ukhuselo olongezelelekileyo, ibhatyi entle isebenza kakuhle kwimicimbi yeqhina elimnyama. Ukuchukumisa ukubengezela kuyigcina ngokusesikweni.
UAlexingokuhlwa ilokhwe ye-A-line midi kunye nebhatyi, $ 189, Macys.com
Umtya we-allover kunye ne-hue eluhlaza eyahlukileyo yale ngubo emnyama yomtshato weendwendwe uyenza ibe yintloko yokujika.
ML Monique Lhuillier ilokhwe eluhlaza yentyatyambo eluhlaza, ukusuka kwi- $ 55, RenttheRunway.com
Le maxi yahlukileyo inokuguqula ukusuka kumtya ongenamtya uye kwi-halter ukuya kwi-criss-cross neckline-ye-15-kunye nezitayile zizonke-ukuyenza ilokhwe enqabileyo emnyama ukunxiba oya kuyinxiba ngaphezu kwesinye.
IBHHLN Isinxibo sejinja esiguqukayo, $ 310, Anthropologie.com
Ingubo enemikhono emide ekhupha ubukhazikhazi ilungile imitya yomtshato womtshato womfazi.
Boohoo Isinxibo se-slinky twist ngaphambili, $ 35, I-US.ASOS.com
Abasetyhini banokuhamba ngokoqobo 'ngeqhina elimnyama' nangoko-kwaye singabalandeli abakhulu bale nkangeleko.
Encinci emnyama I-lapel emnyama yebhatyi ende ye-tuxedo, $ 149, LittleBlackTux.com ; emnyama emnyama ibhulukhwe ye-tuxedo, $ 99, LittleBlackTux.com
ubuza njani ezintombini diy
Asinakugqiba ukuba ingaba ngumbala wequnube ocebileyo okanye yikati ekhethekileyo eqhotyoshelweyo eyenza le lokhwe ibonakale — kodwa ngokuqinisekileyo inye!
Ilifa leMveli laseHalston Ingubo kaDahlia Cape, $ 50, RenttheRunway.com
Isinxibo esimnyama somtshato womtshato womfazi ekuvumela ukuba uhambe ngokukhawuleza njengoko ufuna.
R & M Richards ingubo encinci elandelwe, $ 149, Macys.com
Ngokwe-sexy yayo kodwa isengathobekanga.
Ukucacisa Isinxibo esimnandi sokulungisa-kunye-ne-flare maxi dress, $ 98, Express.com
Ukukhupha ikhaphethi ebomvu! Iinkcukacha zeentyatyambo zegolide kunye nengubo entle yexilongo ye-tulle yenza le gown ilungele eyona nto isesikweni.
UMarchesa Notte i-roses ewayo, ukusuka kwi- $ 110, RenttheRunway.com
Umthunzi oluhlaza-luhlaza okwesibhakabhaka kunye nemikhono yekepusi yongeza ubuqhetseba kwisinxibo esineeallover sequins kunye nesibhakabhaka esiphakamileyo.
UAlice + Olivia UArora wahombisa ingubo yomkhono, $ 995, UAliceandOlivia.com
I-dupioni ebutofotofo kunye ne-A-line skirt eqokelelweyo eqhelekile kule lokhwe emnyama yomtshato weendwendwe.
UAlfred Sung Isinxibo se-cap-sleeve dupioni esigcwele, ukusuka kwi- $ 230, Imvu.com
I-fuchsia ekhanyayo yongeza umbala wombala kule ngubo yomtshato womtshato omnyama. Siyayithanda ukuba iyafumaneka ngokuthe ngqo, encinci, ende kunye nobukhulu obudibeneyo.
UCarmen marc valvo fuchsia ruffle ingubo, ukusuka kwi- $ 90, RenttheRunway.com
Isinxibo samadoda somtshato omnyama womtshato
I-tuxedo encinci elungele i-lapel ye-silch notch lapels yimbonakalo yanamhlanje yesinxibo esimnyama somtshato wamadoda.
Umphathi isiqalo / ubukhazikhazi bufanele i-tuxedo yoboya, $ 895, Imvu.com
Ngelixa nayiphi na intambo emnyama esesikweni ilingana nekhowudi yokunxiba, ngekhe ahambe gwenxa ngesaphetha sesilika yakudala.
UJ. Crew i-mercantile silk tie tie, i- $ 25, JCrew.com
Ukuba isihlwele asixinekanga kakhulu, kuya kufuneka akwazi ukubaleka ne-tux tux, ukuba angathanda.
Izithembiso zokuthembisa izibini ezitshatileyo ezingaphantsi kweminyaka engama-50
I-Avenue yeSaks yesihlanu Ijacket yoboya be-tuxedo, $ 798, SaksFifthAvenue.com
Ihempe elungelelaniswe kakuhle yakudala ayisiyongxabano, ayisoze isilele ukujongana ne-tuxedo yakhe.
Ukucacisa Ihempe yokunxiba ye-tuxedo yeklasikhi efanelekileyo, $ 70, Express.com
Iikhowudi zokunxiba ezimnyama ezimnyama kunye neendlela zokunxiba ezimnyama zinganika ithuba lokukhetha i-tuxedo.
Abazalwana baka Brooks I-regent fit plaid tuxedo ibhatyi, $ 598, YenokAnksi.com
Le bhatyi ye-tux ecekeceke iyafumaneka ngobukhulu ukuze ilingane amadoda amakhulu nade.
ASOS NGOKUQHELEKILEYO ibhatyi encinci ye-tuxedo emnyama, $ 135, I-US.ASOS.com
Ezi bhulukhwe ze-tuxedo zizinxibo ezimnyama zomtshato womtshato womntu, ukuba xa athe wazama ngazo, uya kufuna ukuthenga, hayi ukurenta.
UJ. Crew I-Ludlow slim-fit tuxedo pant eboyeni base-Italiya, $ 265, JCrew.com
Uzakufuna isibini esihle sekhonkco ukuze ahambe nale shati imnandi, edibeneyo ngokugqibeleleyo nebhatyi ye-tuxedo ene-lapel yesitayile esiqhelekileyo.
amakhonkco wesithembiso esinexabiso eliphantsi
Abazalwana baka Brooks I-regent fit ten-pleat tennis collar tuxedo shirt, $ 135, YenokAnksi.com
Patent oxfords yesikhumba yenza umtya ogqibeleleyo womtshato womntu izihlangu zamadoda.
IFlorsheim I-Kingston patent patent Oxford toe oxford, $ 140, Macys.com
I-lapel yenotshi inika le tux imvakalelo yebhatyi yesuti ngelixa isesesikweni ngokwaneleyo ukuba indwendwe yomtshato omnyama inxibe.
UMNYAMA nguVera Wang Ibheji emnyama yenotshi, $ 230, Tuxedo.MensWearhouse.com
mr no mrs champagne flute
ngubani omele ukumenyelwa kwisidlo sangokuhlwa sokuziqhelanisa
Iyingqayizivele yakhe kunye nemitshato yomtshato
yintoni ubudala obuphakathi bokutshata
Ihlobo langaphandle lomtshato weendwendwe
iindlela ezipholileyo zokubuza abo batshatayo